Waxyaabaha Sababa Caado Wareerka Dumarka - Daryeel Magazine
Waa ku kala duwanyihin dumarka intey le’egtahey dhiiga ka imaada waqtiga caadada ku jiraan. Sida caadiga ah ayaa ah dumarka qeebtood helaan wax ey qiyaasta ka baxda 12 qaando oo dhiig ah, kuwana waxa laga yaaba 3 qaando ama ka yar bishii.
Caadada caadiga ah (A Normal Period)
Caado Wareerka (An irregular Period)
Caado-keen (Premenstuaral Syndrome),taaso ah iney dumarka isku arkan xanaaq dhaw, murqo xanuun caloosha agagaarkeeda ah, dulqaad la’aan, iyo wareer imaada ka hor inteysan helin caadada. Sidoo kale is badal ku dhaca hab-socodka dabiiciga ah ee cadada.
Ugaxan-sidaha Fiixda Leh (Polycystic Ovary Syndrome)
Ugaxan-sidaha fiixda leh ayaa ah xaalad caafimaad oo sabab caan u ah caada wareerka dumarka. Sidoo kale wuxu dhaliya qofka oo aad u cayila, timaha oo aad u baxa iyo madhaleysnimo. Cudurkan oo ah mid hido loo kasbado ama ku dhaca haweenka markey dhallaan kabacdi, taaso la ogeyn sababta runta ah oo keenta. Ugaxan-sidaha Fiixda leh oo aan laheyn dawo rasmiya laakin dakhtar hadaad u tagtid kuu sheegi karo qaabab aad raaci kartid si uu xanuunkisa kugu sahlanaado oo ey ka mid tahay badalida qaabkaga nolol maalmeed.
Waqtiyada badan oo dumarka caado wareerka ku dhaco waxa u badan markey uur qaadan, taasoo dhiiga kasoo daaho ama in ka yar/ ka badan intey hore u heli jireen hela. Tan micnaheedu ma ahan inaad uur leedahay markastoo caado wareer kula soo gudboonado balse waa haboontahay inaad dakhtar u tagta
* hormoon: Dhacaan ay qanjirrada jirka qaarkood dhalaan oo dhiigga ku daraan dabadeedna dhaxalsiiya ubno badani inay shaqadooda fuliyaan, korriimada jirkana qayb weyn ka qaata.
*istroojin: Koox hormoonno ah mid ka tirsan, sida: istiriyool, istiroon iyo istradiyool, kuwaasoo suga koridda qaab dumareedka ayagoo horumarinaya koritaanka iyo hawlqabadka xubno jinsiyeedka umarka iyo qaab jinsiyeedka labaad ee dumarka sida: korista naasaha.
7 Caado Oo Sababa Cimri Degdega Iyo In Calaamadaha Gabowgu Qofka Goor Hore Kasoo Muuqdaan Toddobada Caado ee ay Leeyihiin Dadka Waxtarka leh (The Seven Habits of Highly Effective People) Waxyaabaha Ugu Badan Ee Raggu Ay Ku Soo Jiitaan Dumarka Timaha Kasoo Baxa Wajiga Dumarka